Xildhibaanadii la ganaaxay oo qaadacay go'aanka Mursal | KEYDMEDIA ONLINE
Xildhibaanadii la ganaaxay oo qaadacay go’aanka Mursal
Shan iyo tobankii Xildhibaan ee shalay uu sheegay guddoomiyaha baarlamaanka waqtigu ka dhamaaday in laga ganaaxay kulamada soo socda ee golahaa ayaa sheegay in waraaqda uu Maxamed Mursal soo saaray ay tahay sharci darro aysana aqbali doonin.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xildhibaanadii uu shalay sheegay Maxamed Mursal in aysan soo xaadiri karin shanta kulan ee soo socota ee Golaha Shacabka oo shir jaraa’id ku qabtay Magaalada Muqdisho ayaa gaashaanka u duruuray, hadalka Guddoomiya Baarlamaanka waqtigu ka dhamaaday.
Si cad Xildhibaanadu waxa ay sheegeen in ay birri tagi doonaan golaha, oo aysan u hoggaan sami doonin waraaqda ay sharci darrada ku tilmaameen.
Xildhibaanada ayaa sheegay in uusan jirin wax sharci ah oo Maxamed Mursal, xaq u siinaya inuu soo saaro go’aan ceyn kaan ah, waxayna ku eedeeyeen inuu ku tuntay sharciga iyo dastuurka dalka u yaalla, waxayna arrintaas ka soo saaren, saddex qodob oo kala ah;
Ma jirto wax sharci ah uu u cuskaday, ganaaxa uu soo saray Guddoomiyahu.
Ma jiro sharci ama xeer fasaxaya in guddoomiyhu soo saaro go’aan nuucaan ah.
Wuxuu meel uga dhacay xeer hoosaadka Golaha Shacabka Guddoomiyuhu.
Sidoo kale Xildhibaanadu waxa ay Maxamed Mursal ku eedeeyeen inuu xarunta Golaha Shacabka soo galiyay askar dhar cad ah oo uu hoggaaminayo nin hore uga tirsanaa Kooxda Al-Shabaab oo la yiraahdo Shakiib.
Ninka watay ciidanka Xarunta la keenay ayay ku sheegeen in isagoo dhaawac ah oo dagaalamaya laga qabtay Suuqa Bakaaraha, isla markaana lagu xiray Xabsiga, halka markii dane loo sii dhaadhiciyay xerada Sarandi oo lagu xiro shaqsiyaadka iska soo dhiiba Al-Shabaab.
Ugu danbeyn, Xildhinbaanadu waxa ay hoosta ka xariiqeen in wixii amni darro soo gara uu masuuliyaddeeda qaadayo Maxamed Mursal, oo isagu ciidamo intooda badan Shabaab ah u fasaxay in ay soo galaan xarunta baarlamaanka.